Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.2 Mangataka andinin-teny
Noho ny fisian'ny fitomboan'ny fitondran-tenantsika amin'ny loharanom-baovao lehibe, toy ny angona avy amin'ny governemanta sy ny birao, dia mety hihevitra ny sasany fa ny fametrahana fanontaniana dia zavatra taloha. Saingy, tsy izany tsotra izany. Misy antony roa lehibe izay heveriko fa hanohy hametraka fanontaniana amin'ny olona ny mpikaroka. Voalohany, araka ny resahiko ao amin'ny toko faha-2, dia misy olana goavana amin'ny fahamendrehana, ny fahafenoana, ary ny fahazoana ny loharanom-baovao marobe. Faharoa, ankoatra ireo antony mahazatra ireo dia misy antony lehibe kokoa: misy zavatra saro-pantarina izay azo ianarana amin'ny fampahalalana momba ny fitondran-tena-na dia ny fampitam-baovao amin'ny fitondran-tena aza. Ohatra, ny sasany amin'ireo vokatra ara-piaraha-monina sy zava-tsarobidy indrindra dia ny fanjakana anatiny , toy ny fihetseham-po, fahalalana, fanantenana ary hevitra. Ny fanjakana anatiny dia misy eo amin'ny lohan'ny olona, ​​ary indraindray ny fomba tsara indrindra hianarana momba ny fanjakana anatiny dia ny mangataka.
Ny fetran'ny fitrandrahana lehibe sy loharanom-baovao lehibe, ary ny fomba ahafahana mandresy ny fanadihadiana, dia asehon'i Moira Burke sy ny fikarohana nataon'i Robert Kraut (2014) momba ny fiantraikan'ny fifandraisan'ny fifandraisana amin'ny Facebook. Tamin'io fotoana io dia niasa tao amin'ny Facebook i Burke mba hahafahany miditra tanteraka amin'ny iray amin'ireo rakitsoratra betsaka sy feno amin'ny antsipirihany momba ny fitondrantenan'olombelona izay noforonina. Kanefa, na izany aza, i Burke sy Kraut dia tsy maintsy nampiasa fanadihadiana mba hamaliana ny fanontanian'izy ireo. Ny vokatr'izany tombontsoa izany-ny fahatsapana ny fifanakaikezan'ny mpangataka sy ny namany-dia fitondram-panjakana anatiny izay misy ao amin'ny lohan'ny mpanadihady. Ankoatra ny fampiasana fanadihadiana hanangona ny valiny mahaliana azy dia tsy maintsy nampiasa fanadihadiana ihany koa i Burke sy i Kraut mba hianatra momba ny mety ho antony mampiahiahy. Tian'izy ireo manokana ny fiantraikan'ny fifandraisana amin'ny Facebook amin'ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fantsona hafa (ohatra mailaka, finday, ary tarehy mifanatrika). Na dia voarakitra an-tsoratra aza ny fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny finday, dia tsy natao ho an'ny Burke sy Kraut ireny sora-tanana ireny ka tsy maintsy nanangona azy ireo tamin'ny fanadihadiana iray. Nofintinin'i Burke sy Kraut ny fampahalalam-baovao momba ny fifandraisana am-piadanana sy ny fifandraisana an-tserasera amin'ny Facebook miaraka amin'ny tahirin-tserasera Facebook fa ny fifandraisana amin'ny alalan'ny Facebook dia nitarika ho amin'ny fitomboan'ny fahatsapana akaiky.
Araka ny asehon'i Burke sy Kraut, ny loharanom-baovao lehibe dia tsy hanafoana ny filàna fanontaniana ny olona. Raha ny marina, dia ny lesona mifanohitra amin'ity fianarana ity no ataoko: ny loharanom-baovao lehibe dia mety hampitombo ny lanjan'ny fametrahana fanontaniana, araka izay asehoko ato amin'ity toko ity. Noho izany, ny fomba tsara indrindra hieritreretana ny fifandraisana eo amin'ny fangatahana sy ny fandinihana dia ny hoe izy ireo dia afa-po fa tsy mpanolo-tsaina; Toy ny menaka sy ny jelly izy ireo. Raha misy dibera maromaro bebe kokoa, ny olona dia te hividy misimisy kokoa; Raha misy ny angona lehibe kokoa, heveriko fa haniry fanadihadiana bebe kokoa ny olona.